Hevitra MPANOHARIANA | Jiona 2007 |
LalÃ na mampiady hevitra
TanÃ nanâ€™ny zaridaina
Fampihavanana sa fandranitana
2007-06-15 @ 08:05 in Finoana
Vao tsy ela no nanao fanambarana momba ny fandroahana mompera ny fivondronamben’ny eveka teto Madagasikara. Ankehitriny dia namoaka fanambarana indray ny filankevitra maharitry ny fivondronamben’ny eveka eto Madagasikara. Fanambarana miantefa indrindra indrindra amin’ny kristiana katolika. Ny andinin-tSoratra Masina nanankinana ny fanambarana dia izay voasoratra ao amin’ny evanjely nosoratan’ny Md Marka 10 :49 ary naompana amin’ny lohahevitra manao hoe : « Matokia, mitsangana raiso ny andraikitrao ».
Alohan’ny filazalazana tsotra ny fanambarana dia te-hanoratra ny zavatra voarakitra ao amin’io andini-tSoratra Masina io ihany aho. Tantaran’ilay jamba mangataka eo amoron-dalana eo ampivoahana ny tanànan’i Jeriko. Nandre rodorodon’olona maro ka nahafantatra fa miaraka amin’izy ireo ny lehilahy iray antsoina hoe Jesoa avy any Nazareta. Niantsoantso avy hatrany ny lehilahy nanao hoe ry zanaky Davida ! Jesoa o miantrà ahy ! nitrerona azy hangina ny hafa fa vao maika izy niantsoantso ilay teny teo ihany. Nijanona i Jesoa ka nampiantso azy. Dia nantsoina ilay jamba sady nitenenana hoe : Matokia, miarena fa miantso anao Izy (Jesoa). Niatsambotra nanary lamba teny amin’i Jesoa ilay jamba. Dia nanontany i Jesoa hoe Inona no tianao ataoko aminao ? Dia namaly izy hoe : Mpampianatra o ! ny mba hahitako ! Dia namaly i Jesoa hoe : Mandehana ny finoanao no nahavonjy anao. Dia nanohy ny lalany i Jesoa.
Azo tarafina avy hatrany amin’ny toe-java-misy ankehitriny io tantara kely nakan’ny filankevitra io andini-tSoratra Masina io. Antsoantson’ilay jamba na dia misy mitady hanampim-bava aza. Antsoantso mankarenin-tsofina matoa misy mitrerona azy. Nefa antsoantso mila famonjena no tena fotony. Raha ampitahaina ny teny ao amin’ny Evanjely sy ny lohahevitry ny fanambarana dia ampidirina ho antson’i Jesoa ilay teny handraisan’ny tsirairay amin’ny kristiana katolika andraikitra eo amin’ny sehatry ny fiainam-pirenena.
Ny votoaty tadidy amin’ny fanambaran’ny filankevitra kosa dia maneho fa Apostolin’ny fihavanana ny fiangonana katolika. Tsikariny ny tsy fahampian’ny fifanatonana, ny faharavan’ny harena iombonana, ny herisetra miseho lany any amin’ny faritra ary ny tsy fitokian’ny mpitondra ny fiangonana katolika. Amin’izao vanim-potoana ankatoky ny fetim-pirenena izao dia avoitrany fa iray ny vahoaka malagasy, iray fiteny, iray tany ary iray vatsy. Ao anatin’izay firaisana izay indrindra no tokony hisian’ny fifanakalozan-kevitra. Tsy ekena ny fampisaraham-bazana, ny fananganana ho an’ny tena sy ny fanaovana ho tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Koa manentana ny kristiana katolika tsirairay hirotsaka handray anjara bebe kokoa amin’ny fiainam-pirenena sy ny fampandrosoana ny mpiara-belona ka fitaratra amin’izany i Victoire Rasoamanarivo sy ny frera Raphael Rafiringa ary atao eo ambany fahasoavan’i Masina Maria Imakole. Hatreo ny zavatra voaraiko. Ny fampandrosoana nambara moa dia ny fisahanana ny fampianarana, ny fitsaboana, ny fanampiana ny mahantra ary ny drafitra fampandrosoana isan-karazany ao amin’ny rafitra katolika. Saika adinoko ny famporisihana mba handalina bebe kokoa ny toe-java-misy ankehitriny.
Ny hevitro manokana dia izao : Nanadino ny fampitonena ny tsirairay izy ao anatin’ny ady ambadika (tsy hita maso) izao na nanalavitra izany kokoa aza izy ireo sanatrian’izany. Nanjary hafa dia hafa ny fiantraikan’ny fanambarana teo amin’ny mpihaino tsirairay. Tsy nisy sahy nanambara ny heviny ny olona mpiady hevitra tao amin’ny karajia sy ny kidaona maraina. Samy mitsakotsako angaha aloha.
Io indray Ravalomanana
2007-06-13 @ 08:35 in Toekarena
Mahoraka tamin’ny rehetra indray ny kabarin’ny filoham-pirenena Ravalomanana omaly teo anoloan’ny lapan’ny tanàna tany Taolagnaro omaly 12 jona 2007 (efa voahitsy e!) maraina. Nametraka ny vatofehizoro (vatofototra no ilazan’ny haino aman-jery azy) anamboarana ny seranana ao Ehoala manko izy tamin’io fotoana io.
Minisitra folo ankoatra ny praiministra ary tompon’andraiki-panjakana maro hafa no niaraka taminy nandritra io fitokanana io sy ny fitsidihana ny toerana hananganana ny ozinina ihany koa moa. Ny ozinina izay eo amin’ny 13km miala ny seranan’i Ehoala eo ho eo. Niara-nijery sy niara-nidinika tamin’ny tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Qmm moa izy nandritra izany fotoana izany.
Fa ny tena nahasarika ny mpanao gazety sy ny mpanara-baovao moa dia ny kabarin’ny filoha nandritra izany fitsidihana omaly izany. Nivantana tamin’ny mpndraharaha teo an-toerana aloha ny resaka. Niteny tamin’ny Qmm aloha izy. Fantatrareo fa manana ny zavaboary izay azy manokana i Madagasikara koa miteny aminareo aho tandrovy ny zavaboary. Io teny nivantana tamin’ny teo an-toerana io moa mety ho tsy dia mahasarika ny mpampita vaovao.
Manaraka izany dia niteny tamin’ireo mpandraharaha « privé » sasany izy (izay no filazany azy). Fantatsika rehetra, hoy izy, fa miroborobo fatratra ny varotra petrole eto amintsika. Tsinontsinona eo dia misondrotra ny vidin’ny petrole. Hilaza zavatra roa aminareo aho : voalohany, miakatra (mari-toerana) izao ny sandan’ny vola malagasy. Efa niresaka taminareo ny governeran’ny banky foibe tamin’io toe-javatra io. Nefa dia mbola nakarinareo ihany ny vidin’ny solika.
Faharoa manaraka izany, samy mpandraharaha isika, samy manaraka ny vidin’ny solika iraisam-pirenena noho izany samy mahalala ny vidiny. Tsy hitako izay tokony hampakarana ny vidiny tahaka izao. Samy mahafantatra fa produit sensible ny petrole ka nahoana no tsy niera tamin’ny governemanta akory ianareo tamin’ny fampakarana azy ? (araka ny filazan’ny sasany manko dia mila fierana hatrany io fisindrotana io fa tsy ataotao fotsiny amin’izao). Sa niera taminareo ve izy Atoa praiminisitra ? (tsia !). Eto dia manome baiko ny governemanta aho hifampidinika amin-dry zareo amin’ity raharaha ity.
Ho antsika Malagasy ihany koa dia mila miteny sy miray hina isika, ary maneho ny mahalamagasy antsika. Izany no nampandroso ny Japoney, ny Amerikana, ny Alemana. Nampiseho ny mahamalagasy azy izy (izay no teny disony). Rehefa tsy miteny isika dia manao izay saim-pantany izy. Tamin’ity kabary ity moa dia niverina indray ilay teny hoe « mandehana mody » fa noho ny halakin’ny teny nambarany dia tsy araka mihitsy. Ary dia tsinjoko amin’ny gazety moa fa saiky tsy naharaka ny teniny ny maro. Ilay kabary anefa tsy novakiana fa izay tao antsainy ihany no nambarany.
Raha nijery ny famerenana C.Iv. sy Mad
2007-06-09 @ 11:51 in Spaoro
Nalefa tamin’ny televiziona malagasy tamin’ny alakamisy alina teo ihany ilay lalao famerenana nihaonan’ny Ivoariana sy ny Malagasy. Lalao izay efa fantatra ny valiny fa nomontsanin’ny Ivoariana isika. Tsy hoe resy isika dia hangina amin’ny toe-javatra sahala amin’ireny fa mba liana ihany koa ny tena hamantatra ny antom-paharesena. Izay angamba ilay fitiavana.
Andeha aloha hamantatra ny nolazain’ny mpanao gazetin’ny radio nasionaly isika. Nanao fampitahana ny lalao famerenana teo amin’ny roa tonta izay natao tany Cote d’Ivoire moa Atoa Daniel Randriamaro. Hoy izy hoe tamin’ny fotoana nahasangany irery an’i Bakayoko dia montsana 6 noho ny 0 isika tamin’izany fotoana izany. Tamin’ity fotoana ity kosa dia sangany any Eoropa avokoa no nantsoin’ny mpanazatra ary izy 11 nilalao voalohany ka 5 noho ny 0 no azo, izany hoe araka ny nolazainy dia efa nihena aloha ny isa tafiditra tany na dia montsana aza isika. Mazava loatra fa resaka fampaherezana ny ekipa mbola hiatrika ny lalao famerenana amin’ny Gabon no anton’izay filazana izay.
Nahavariana tokoa moa fa dia tao anatin’izay fisainan’ny fankaherezana izay angaha no nentin’ny filoham-pirenena nanolotra baolina 22 ny ekipam-pirenena. Ny alakamisy manko dia nampanantsoin’ny tao amin’ny fiadidiana ny filoham-pirenena ny filohan’ny federasiona. Angamba efa nangovi-bady mihitsy Atoa Ahmad tamin’io fotoana io. Zavatra hafa mihitsy no nandrasan’ny mpanara-baovao fanatanjahantena indrindra fa ny baolina fandaka manokana nefa dia fanampiana no namalian’ny filoham-pirenena izany. Fandroahana mpanazatra na tompon’andraikitra hafa no nampirangaranga ny betsaka nefa diso fanantenana izay niandry izany. Karazana fahatsapana fahadisoan-kevitra tamin’ny fandroahana voalohany sa tsy fitiavana Frantsay fotsiny izao ?
Izay nankafy ny ekipa breziliana ka nahatsiaro ilay faharesena tamin’ny mondial iny dia mety hahatadidy ny fomba fanoratry ny mpanao gazety nilaza io ekipa sangany io. Raha azoko natao dia naveriko daholo ireny teny rehetra ireny. Azo fehezina hoe tsy ireny mihitsy no filalaon’ny Malagasy ary tsy tahaka ireny ihany koa ny toe-tsaina nentina niatrika iny lalao iny. Gaga ihany ny tena mahita isan’andro fa misy ny atao hoe mpikarakara ara-tsaina ao amin’ity ekipa ity fa tsoriko hoe tsy nanao ny asany izy raha tsy hoe nisandoka fahaizana fotsiny angaha. Izay iray nalehany na ny mpanazatra no tsy mahalala akory ny mpilalaony na noterena tamin’ny fomba filalao tsy mahazatra azy ireo mpilalao ireo. Ny mpilalao notsongaina ankoatra ny mahatanora azy dia heveriko fa noho izy ireo mpanao tolotolotra madinika sy mandady amin’ny tany (tranonkala hoy ny mpitantara fahiny). Izay fomba filalao izay manko no andrasan’ny mpijery eto an-toerana (Antananarivo) na dia mety tsy ho ao loatra aza ny vokatra. Nefa ilay lalao hita farany dia ny langalanga sy ny taritarika no tena betsaka. Izany hoe sady be no tia tena, na te-ho vedety, no tsy misy loatra no tolotra tsara nomena ny namana. Raha io fomba filalao hita farany io no jerena dia tokony ho ny As Adema no nalefa tany Cote d’Ivoire. Ry zareo Adema manko no tena havanana amin’io fomba filalao natao tany ivelany io nefa tsy nisy avy amin-dry zareo nantsoina na dia manana ny fahaizana aza toa an’i Tholix izay vodilaharana ankavia te-hiakatra amin’ny irakiraka na fanafihana ankavia mandrakariva.
Voamariko fa tsy nisy tolotra nataon’ny mpiandry tokonana ny fiarovana mihitsy tamin’io lalao io fa dakabe nankany aloha fotsiny no fetra. Tahaka ny hoe manao izay hanalana ny baolina tsy eo akaiky fotsiny no natao mba tsy hahafaty betsaka sy haingana ny mpifanandrina amin’ny tena. Izay baolina nalefa tany aloha izay anefa dia Tsy misy azon’ny mpanafika malagasy izay sady fohy ny kely ny baolina avy amin’izany. Mazava loatra fa ny misambotra ny baolina eny ampelatongotry ny tompontany no tena lahasan’ny irakiraka afovoany fa tsy ny mizara baolina loatra. Ary raha nisy aza ny rindran-damina somary tsaratsara dia tsy azon’ny tokony hamono baolina hatrany izay tolotra farany avy eny amin’ny elatra.
Manaraka izany dia tsy tao mihitsy ny toe-tsaina hiatrika ny lalao araka ny efa nosoratako teo ambony ihany. Marihina aloha fa ny baolina rehetra matin’ny Ivoariana dia avy any amin’ny elatra havanan-dry zareo avokoa. Tahaka ny maneho hoe any ihany no lalana ahafatesana baolina. Tsy fantatra intsony izay tena marina fa tahaka ny kapiteny Jimmy no nitana iny faritra iny. Maimaika tsy amin’ny antony ny mpilalao fa tsy mametraka ny fomba filalaony hitazona baolina hanova endrika ny lalao. Tahaka ny manilika baolina fotsiny no natao.
Nisy aza fanafihana indray mandeha efa nitaritarika ilay mpilalao iray nefa dia nosarihin’ny namany ho azy indray ilay baolina avy eo. Azo fintinina fa tsy nisy lalao iraisana mihitsy nasehon’ny mpilalao malagasy nandritra ny 90 miniotra fa samy manao izay saim-pantany ka dia dobo tanteraka ny isa avy eo. Hita mihitsy ohatra rehefa amin’ny lalao goavana fa rehefa misy fotoana maty fa naratra mila tsaboina nympiandry tokonana dia eo no manararaotra manome toromarika indray ny mpanazatra. Tsy nisy mihitsy izany teo amin’ny mpanazatra malagasy nefa indroa notsaboina i Bruno Jaozara. Tsy mahagaga ny mpanao gazety Ivoariana raha nila resaka taminy ary dia namaly tokoa ilay mpanazatra. Rikoriko tanteraka aho nahita ilay toe-draharaha.
Eto ampamehezana dia voamarika fa indray ihany no nandaka baolina an-joro ny malagasy raha nahatratra sivy izany ho an’ny Ivoariana. Manaraka izany dia mitovy ny isan’ny fahadisoana teo amin’ny Malagasy sy ny Ivoariana saingy ny isan’ny karatra mavo no nahazo roa ny malagasy. Nanana baolina tokony ho tafiditra (Occasions de buts) efatra (telo sy iray) ny ivoariana raha telo kosa (fidirana faharoa avokoa) ny an’ny Malagasy. Ny isan’ny tifitra kosa dia 11 (dimy ny tamin’ny loha) ny an’ny Ivoariana raha 7 izay iray monja no nanandrify anaty tolana ny Malagasy. Marihina fa ilay baolina tafiditry Didier Drogba dia hitako mihitsy fa nihoatra alohan’ny vodilaharana izy vao taty ampiaingana mihitsy. Dimy rahateo ny azy no tratran’io nihoatra ny vodilaharana io izy raha tsy nanao izany mihitsy ny malagasy izay tsy nanana mpitifi-baolina mihitsy tamin’io andro io. Soratako etoana ihany koa fa tsy mahay maka sary mihitsy ireo mpaka sary Ivoariana raha jerena amin’ity lalao ity fotsiny. Enga anie ka ho diso ny eritreritro.